छोरीको व्यथा’ जुन पढ्दा तपाईंको आँखा रसाउँछ…अवस्य पढ्नुहोस !! - MassiveKhabar
छोरीको व्यथा’ जुन पढ्दा तपाईंको आँखा रसाउँछ…अवस्य पढ्नुहोस !!
सामाजीक बिकृती हटाउने सोच लिएर हिडेको छु ,पक्कै पनि पढेर साथ दिनु हुनेछ जतिसक्दो सेयर पनि गरिदिनु होला ,आमा म अहिले बिहे गर्दिन , छ‍ोरीले भनिन ,आमा : यत्तिको घर पाउदा नि के भएको त?छोरी :: पढ्छु के आमा !आमा : उनिहरुले पढाइदिन्छन, तैले बिहे गर्नै पर्छ ।छोरीले अब कर गरिनान उनले बिहे गर्न राजी भइन् ।बिहेमा भएको केही समय राम्रो थियो त्यसपछि उनले आफू पढ्ने कुरा आफ्नो श्रीमान लाई भनिन् ।
श्रीमान : किन पढ्नु पर्यो ?श्रीमती : पढ्ने मेरो रहर हो, म जसरी नि पढ्छु ।श्रीमान : बुहारी भएर ठुलो कुरा गरेको सुहाउदैन। खुरुखुरु घरको काम गर्न !श्रीमतीले आफुले पढ्ने चाहाना मनमा नै दवाएर राखिन् ।सासू ,ससुरा, नन्द कोही पनि बोलेन । उनलाई सबैले एक्लो बनाउन थाले । आफ्नो श्रीमान दिनदिनै झगडा गर्न थाले, रिसाउन थाले, उनलाई माया नै गरेनन।
आफ्नो माइतीमा आमा बाबालाई भनौ भने पिर मान्ने हुन कि भनेर आफ्नो पीडा मनमा दवाएर राखिन् ।२ वर्ष पछि उनीमाथि झन अत्याचार गर्न थालियो ।घरमा कोही नबोल्ने श्रीमान सधै झग’डा गर्ने रिसा’उने गर्न थाले पछि उनलाई त्यो घरमा बस्न मन नै भएन । उनी आफ्नो माइती गइन् ।खुसि भएर हिड्छु भन्दा भन्दै उनको अनुहारमा पीडा देखियो । उनले आफ्नो आमालाई भनिन् ।
आमा मलाई त्यो घरमा धेरै दुख दिन्छन ।आमा : नहुने कुरा नगर ।छोरी : मत जान्न आमा अब त्यो घर !आमा : घर गरेर खान नसकेर बाहाना नबना है ।छोरी : माया त गर्दैन म कसरी जाने ?आमा : केही थाहा छैन जान नै पर्छ,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
छोरी : अहँ म त जान्नकेही दिन पछि :उनी माइतीमा बसे पछि गाउलेले कुरा ‘काट्न थाले । आफन्तले हेला गर्न थाले । सबैलाई पी’डा सुनाइन् तर उनको पि’डा मजाक बन्यो , उनलाई कसैले साथ दिएनन।उनको जन्म दिने आमाले समेत साथ दिइनन् उनी फेरि टुटिन् । आमाले ‘घर जा’ भन्ने घरकाले ‘घर नआइज’ भन्ने यस्तै चलिरहेको थियो ।
यहि सोचेर कसैको साथ नपाएकी ती छोरीले अन्तिममा मृ’त्यु नै रोजिन आ’त्मह’त्या गरेर आफ्नो प्राण त्या’ग गरिन ।सन्देश : छोरीको असली भाग्य बिहेपछि थाहा हुन्छ । दुख पाएर माइती आएकी चेलीको तागत बन्नुस । उनको बारेमा कुरा का,टेर उनलाई कमजोर नबनाउनुस। नारी देवि हुन बुझ्ने कोशिश गर्नुस ।
बिना गल्ती दुनियाँले कुरा काट्दा आफ्नो परिवार कसैको साथ नपाउदा अनि टु्ट्छिन। उनको साथमा कोही नहुदा उनी कम’जोर हुन्छिन। अनि मृ’त्यु रोज्छिन। यस्तो हुन कदापि नदिनुस है ।